Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo xalay laga dareemay Xaafadaha Waqooyi ee Muqdisho | Banaadir Times
HomeUncategorisedDhaq dhaqaaqyo Ciidan oo xalay laga dareemay Xaafadaha Waqooyi ee Muqdisho
Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo xalay laga dareemay Xaafadaha Waqooyi ee Muqdisho
Waxaa xalay siweyn dhaq dhaqaaqyo Ciidan looga dareemay Xaafadaha Waqooyi ee Magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinka Cabdulcasiis iyo Kaaraan, halkaa soo dhawaan ay dageen Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee Sheekh Shariif & Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhaq dhaqaaqyada Ciidan ayaa waxaa ay ka dambeeysay, kadib markii Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya oo sida la sheegay kasoo horjeeda muddo kororsiga ay soo gaaren Waqooyiga muqdisho, kuwaas oo ka yimid furimaha dagaalka ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaa Yuusuf Raage ayaa waxaa la sheegay in uu ku baxay Ciidamada, isaga oo la kulmay Taliyaha guutada 4,aad qeybta 27,aad Korneyl Saney Cabdulle oo hoggaminaya Ciidamada si ay dib ugu laabtaan degaannadii ay ka yimaadeen.
Dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la heegay in xalay saqdii Dhexe ay Ciidamo farabadan geysay degmooyinka Waqooyi ee gobolka Banaadir, waxaana dadka degmooyinkaas ay sheegeen inay cabsi xoogan soo wajahday.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in saacadaha soo socda ee Maanta ah la filayo inay Warbaahinta la hadlaan Saraakiisha hoggaamineysa Ciidamada Millateriga ah oo taageersan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, kuwaas oo kasoo horjeedda muddo kordhinta ay sameeyeen Golaha Shacabka.
Todobaadyo ka hor ayay aheyd markii Taliyihii Booliska Gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan oo Ciidamo farabadan wata uu farisiin ka sameystay Xaafada Shiirkole ee degmada Hodan, halkaas oo ay u badan yihiin Ehelkiisa, waxaana maamo halkaasi ka taagneyd xiisad dagaal wallow haatan ay qaboowday.
Previous articleDFS oo kasoo horjeesatay qaraarkii Midowga Afrika eedeyna u jeedisay Jabuuti & Kenya
Next articleMaamulka Jubbaland oo ka hadlay Go’aannadii Midowga Afrika